Xilliga xagaaga ee qalajiska dhaqsaha leh ee loo yaqaan 'Spandex / Nylon Ragga Dabaasha Dabaasha ee Xeebta |
Xilliga xagaaga ee qalajiska degdega ah ee 'Spandex / Nylon Ragga Dabaasha Dabaasha ee Xeebta
Dharka ragga ee loogu talagalay raaxada oo buuxda iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa guud, kuwani waa feeryahanno kooban oo loogu talagalay ragga doonaya inay iska daayaan maalinta oo dhan, maalin kasta.
· La keenay
· Agabyada: Doomaha dabaasha ee ragga oo ka samaysan dhar fidsan oo muujinaya jilicsanaan iyo raaxo badan. Naqshadeynta lugta laba jibbaaran waxay siineysaa lugahaaga dabacsanaan badan iyo dareen raaxo leh inta lagu jiro howlaha. UPF 50 + ilaalinta qorraxda iyadoo la xirayo falaaraha UV
· Naqshadeynta Naqshadda: Lugta laba jibbaaran, taatikada caatada ah, dahaarka mesh, tayada dhexda laastikada leh oo leh xarig gudaha wax lagu dhejiyo oo dhex maraya dhammaan jirridda dabaasha, waxaad si xor ah u hagaajin kartaa dhexdaada.
· Dharka Qalalan ee Degdega ah ee loo yaqaan 'Ultra Short qalalan Fabric' oo loo yaqaan 'surfing shorts' Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah oo dhakhso-qallalan, santuuqaaga ayaa qallajin doona daqiiqado gudahood adiga oo ku siinaya muuqaal suurad wacan, ka takhalus khibradaha qoyan ee dabaasha ka dib.
· Boorsada isku-xirnaanta: koobabka kiishka hore ee 'kabakhluu', qolka dheeriga ah iyo raaxada meesha lagu xisaabiyo.
· Mararka qaarkood: Gaaban dabaasha qabow oo ku habboon dhammaan cayaaraha biyaha iyo waxqabadyada. Sida dabaasha, quusitaanka, dabaasha, xeebta, qoraxdoobida, xafladda markabka, barkadda, qolka jimicsiga ama orodka.
Fadlan dooro cabir sax ah sida ku cad jadwalka cabbirka soo socda.
Cabirka M, Dhexda 28 `` - 30 '',
Xajmiga L, Dhexda 30 `` - 32 '',
Cabbirka XL, Dhexda 32 '' - 34 '',
Cabirka XXL, Dhexda 34 `` - 36 '',
Cabirka XXXL, Dhexda 36 '' - 38 '',
Cabbirka XXXXL, Dhexdhexaad 37 '' - 39 ''
Hore: Maqaarka Saaxiibtinimada Degdega ah ee Qalalan Anti-UV Ragga Neefsashada Doomaha
Xiga: Labada Xarig oo la hagaajin karo oo quruxsan leh Dumarka Dharka leh oo leh Dabool la saari karo
Xirmooyinka Dhinacyada Qaabdhismeedka Xiritaanka Laastikada 29.5 ″ -...
Multi Color Multiur waara M-XXXXL Flat Lock Tolida ...